वुहानबाट काेभिड–१९ डायरी: जब मानिसहरू वस्तु बनाइन्छन् · Global Voices नेपालीमा
समाजले हामीलाई सेल्फ–सेन्सरशिप गर्न बाध्य बनाएकाे छ ।
अनुवाद पोष्ट गरिएको4अप्रिल 2020 16:33 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् Español, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, عربي, Nederlands, русский, Français, Filipino, English
याे लेख स्वतन्त्र फिल्ममेकर तथा महिलावादी विज्ञ एइ सियाउमिंग र महिलावादी अभियन्ता गुओ चिङ्ले संयुक्त रूपमा लेखेकाे दैनिकीकाे तेस्राे श्रृङ्खला हाे । दुवैजना काेभीड–१९ काे उद्गमस्थल वुहानमा बसाेबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूका दैनिकीकाे पहिलाे र दाेस्राे श्रृङ्खला यहाँपढ्न सक्नुहुनेछ ।
याे तेस्राे भाग सन् २०२०, फेब्रुअरी ५ देखि १० बिचमा लेखिएकाे हाे । जुन अवधिमा वुहानमा काेराेना भाइरसकाे संक्रमण फैलिएकाे पत्ता लगाउने पहिलाे व्यक्ति डा. ली वेन्लियाङकाे मृत्यु भएकाे थियाे । यी दैनिकीका सकल लेख भने ‘म्याटर न्यूज'मा प्रकाशित छन् ।
याे बिहान, म बेलाबेलामा झस्किएर ब्युझिए । मैले सुत्ने धेरै प्रयत्न गरे, तर म सुत्न सकिन । म ब्युझिएर संसारमा के भइरहेकाे छ भनी जान्न चाहन्न थिए । अन्तमा म उठे र मेराे माेबाइल फाेन अन गरे । त्यहाँ आएका प्राय सन्देशहरू ली वेन्लियाङका बारेमा थिए । एकजनाले एउटा फाेटाे खिचेर पठाएकाे रहेछ । जसमा उनीहरूले मास्क लगाएका थिए र त्यहाँ “मैले बुझ्न सकिन” भनी लेखिएकाे थियाे ।
केही मानिसहरूले याे महामारी सकिनासाथ ‘हामीलाई के भएकाे थियाे भनी हामीले चाँडै बिर्सने छाैं’ भनी बताए । तर, बिर्सन यति सजिलाे कहाँ छ र! हामीले भेटेका सबै मानिसहरू सम्झन नसकाैंला तर हामीमध्ये धेरैले अहिलेकाे याे अवस्था कसरी बिर्सन सकाैंला र! हामीले अहिले के भइरहेकाे छ र हामीले कसलाई भेट्याैं भनी अरूहरूसँग कुराकानी गर्छाैं; जसरी सार्स (SARS) र वेन्चुआन भूकम्पका बारेमा अझ पनि हामी कुरा गर्छाैं । हामी हाम्राे जिवनभर अहिलेकाे सम्झना लिएर बाच्नेछाैं ।
केही दिन अघि मात्र मेराे एकजना साथीले ‘सर्भाइभिङ डिजास्टर’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्न सुझाएकी थिइन् । उक्त वृत्तचित्र श्रृङ्खलाले मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउनका लागि विपद्लाई हाम्राे वास्तविक जिवनमा नाटकिय रूपमा प्रस्तुत गरेकाे छ । आज दिउसाे मैले यसकाे एउटा भाग हेरे, जुन विमान अपहरण सम्बन्धी थियाे । जसमा एकजना व्यक्तिले अपहरणकारीहरूलाई कसरी वशमा पारी आफ्नाे ज्यान जाेगाउने भन्ने बारेमा सिकाउछ । त्यसमा उनले अपहरणकारीकाे पाखुरा र खुट्टा बाँध्दै भन्छन्, “अब हामी उनीहरूका दृष्य हटाउनेछाैं । याे सबै नियन्त्रण वा वशमा पार्ने सम्बन्धी हाे । हामीले उनीहरूकाे शक्ति, दृष्टिकाेण, उनीहरूका क्षमतालाई थिची, हामी जतिसक्दाे बाेल्न सक्नुपर्छ । हामीले आवश्यक परेमा तिनका कान उखेली त्यसलाई वस्तु बनाउन समेत सक्नुपर्छ ।”